E-News Nepali || Fast and Accuracy » सलाम छ कुलमानलाई ! ठेकेदारसँग कुलमानले भने : राति १० बजे फिल्डमा आउँछु, काम नभएको देख्नु नपरोस् !
सलाम छ कुलमानलाई ! ठेकेदारसँग कुलमानले भने : राति १० बजे फिल्डमा आउँछु, काम नभएको देख्नु नपरोस् !
नेपाल विद्युत प्राधिकरण माताहतमा भइरहेका कामको निय’मित अ’नुगमनमा जानु कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दैनिकी नै बनेको छ । समयमै काम पूरा गर्न उहाँ कहिले नागरिकसँग अनि कहिले संसदीय समितिमा सांसदसँग नै बा’झेको देखिन्छ ।
ठेकेदारलाई फकाएर होस् या चे’तावनी दिएर हाेस्, काम बेलैमा सक्न घिसिङको दौ’डधुप बढेको देखिन्छ । सोमबारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाण्डौका तार भू’मिगत गर्ने काम थालेको छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तार भूमिगत गर्न भारतीय कम्पनी के’ईआई इ’न्डस्ट्रिजले जिम्मा पाएको छ ।
आज खनेको सडक भोलिपल्टै पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने र अ’फ्ठेरो ठाउँमा सडक खनेको बढीमा १० दिनभित्र पीच गर्न ठेकेदारसँग स’हमति भएको छ । यसअघि ढल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सडक खन्दा उपत्यकाका नागरिक धुलो र धुवाँले है’रान भएका थिए, अहिले त्यस्तो हुन नदिन ‘हो’राइजेन्टनल डि’रेक्स्नल् ड्रि’लिङ’ प्र’विधि अ’पनाइएको छ ।
जसले पूरै सडक नखनि मुसोले जस्तै प्वाल पार्नेछ । केही मिटरको अ’न्तरमा भने पूरै सडक ख’न्नुपर्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२१ को अक्टोबरसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका बालुवाटार, पानीपोखरी, धर्मस्थली लगायतका ठाउँमा दुई सय ५० किमी क्षेत्रको तार भू’मिगत गर्नुपर्नेछ ।
सडक धु’लाम्य र हि’लाम्य भएर नागरिकको आ’लोचना नआओस् भनेर घिसिङले तार भू’मिगत गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई पनि स’चेत गराइसक्नुभएको छ । सडक खन्दा आउने फोहोर व्यवस्थापन गर्न, धुलो उड्न नदिन र भईरहेको काम छाे’पेर मात्रै गर्न घिसिङले निर्देशन दिनुभएको छ ।
हाम्रो तर्फबाट गरिदिनुपर्ने स’हजीकरणमा कुनै क’मजोरी रहँदैन, तर जुनसुकै हा’लतमा यो काम तो’किएको समयमै स’किनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु । घिसिङले भन्नुभयो । तार भू’मिगत गर्ने कार्यक्रमको उ’द्घाटन सकेर धेरैजसो अ’थिति र विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका नि’कायका प्रतिनिधि बा’हिरिँदा पनि घिसिङले ठेकेदारसँग समयमै काम सक्ने र व्यवस्थित काम गर्नेतर्फ स’चेत गराइरहनुभएको थियो । ‘म आज बेलुकी १० बजे आउँछु र पटक पटक रातिको समयमा छड्के अ’नुगमनमा आउँछु, म आउँदा काम नभएको देख्नु नपरोस्, फ’टाफट काम हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०३:१०